Kutyora muA Alexa's Epamusoro 100,000 Sites | Martech Zone
Zvakatora mwedzi mitanhatu yekushanda nesimba, asi nhasi ndatarisa Alexa uye kutyora 100,000 mucherechedzo (3 mwedzi avhareji).
Dai ndaizofungidzira, ndingangodaro ndakati 10 kusvika kumaawa makumi maviri pavhiki pa blog yangu yemwedzi mitanhatu yekupedzisira yakandiendesa ikoko. Ini ndanga ndichinyatso kutarisira kuti ndakaroverera pamberi peGore Idzva, asi ini ndakanaka nemazuva maviri ekuwedzera.
Nei ndichigovana izvi? Sezvo nechinhu chero chipi zvacho, ndinofunga zvakanaka kuzvimisira zvinangwa. Alexa ndicho chinhu chepedyo kwazvo chandinacho kune 'Internet chinzvimbo' saka zvinondiudza mashandisiro anoita saiti yangu kupesana nevamwe vese. Technorati inopa mashandiro anoita blog yangu kurwisa vamwe. Ndiri pasi pegumi nemaviri uye ndinotarisira kugadzira epamusoro zviuru zvishanu mablogi pakupera kwegore.
Chii chandiri kuita zvakasiyana? Ndakaita maviri ekugadzirisazve, mamwe ekutsvagisa enjini, kumwe kudonhedza matemplate angu, mijenya yemablog inotsinhira pane mamwe mablog, yakawanda trackbacks… asi kazhinji ndakaedza kuramba ndiri pachokwadi kune chiono changu cheicho blog yangu inofanira kuve kuita. Ini ndoda kugovana ruzivo pachena nekuremekedza kushambadzira uye otomatiki.
Misoro yangu inosiyana-siyana, dzimwe nguva ichiwedzera mamwe mabudiro eruzivo rwevanhu (saka unondiziva pachangu) kumatopu pachirongwa (chikamu chehupenyu hwese hwemushambadzi hwemazuva ano - zvakananga kana zvisina kunangana), kushambadza uye maratidziro anoitwa tarisiro yevatengi, blogging uye kuti zvinonyatso batsira sei kushambadzira, uyezve zvangu nguva nenguva.
Inoratidzika kunge iri kushanda zvakanaka, uye ndinofara kuti uri kunakidzwa nayo. Ndokumbira undizivise kana paine mimwe misoro yaungade kuti ndione ndichivhara. Uye zvechokwadi, ini ndicharamba ndichitaura newe zvakananga nezvematambudziko andiri kutarisana nawo ekushambadzira matekinoroji!
Ndira 3, 2007 na9: 19 PM
Chaizvoizvo, Sean… Alexa inoita kunge inonyatso tsanangudza iyo yaunomirira kwenguva refu. Ini ndinofunga imhaka yekuti Alexa inoshandisa 'zvisina kujairika' sampling kufungidzira kusvika. Saka - nekufamba kwenguva, inowanzo kuve yakajeka. Ndicho chimwe chezvikonzero nei ini ndichiteerera zvakanyanya kwenguva refu uye 3-mwedzi yaive chinangwa changu pane kuti 'nhasi'. Ini ndakamira zvishoma pane zvezuva nezuva sezvawakaona pamwe newebsite yako, asi nekufamba kwenguva ndizvo zvakakosha.
"Wow" uye "Uh Oh" zvirokwazvo ndizvo zvandiri kutevera. Ini ndinoshanda nesimba kublog saka chekupedzisira chandiri kuda kuona ndechekuti ndiri kubvisa vanhu pane kuwana nekuchengetedza vanyoreri. Ingori chiyero chekuita kwangu.
Ichowo chiratidzo chakakura sezvo ini ndichibvunza kune vamwe vatengi kune avo mablog. Kana ini ndisingakwanise kukura zvangu kusvika, handina chokwadi kuti vanofanirwa kunge vachiteerera kwandiri! Zvakafanana nekuhaya nyanzvi yeSEO isiri mune yepamusoro 10… usazvinetse!
Jan 4, 2007 pa 6: 06 AM
Makorokoto Doug! Chengetedza zvinyorwa zvikuru shamwari yako
Ndira 6, 2007 na11: 56 PM
Makorokoto Doug! Iwe waratidza kuti kushanda nesimba kunobhadhara. Zvese zvakanak nekurwisa spam, isu tinoda Neo 🙂 Tichitarisira kumberi kumutsiridzo yeblog uye zvinyorwa zvako zvinodzidzisa.
Ndira 10, 2007 na4: 32 PM
Makorokoto! Kuve chiratidzo nerd muhofisi mangu ndakaita chibvumirano chakanaka cheSEO kushanda pachangu kuyedza kuita yedu blog kucherechedzwa uye kuverenga. Isu tanga tichifamba tichikwira mu Alexa zvakare asi hatisati tatyora iyo 100K 3-mwedzi mucherechedzo. Saka ndinoziva chaizvo kuti zvingaome sei.
Kutenda kune yakanaka blog, ramba uchidaro.
Chris Kieff kuMSCO
Yakanyorwa neMunyori we "YAKO MARKETING ANONYUDZA" Maka Stevens
Jan 11, 2007 pa 8: 52 AM
Jan 13, 2007 pa 1: 20 AM
Ndatenda neruzivo. Nzvimbo yakanaka yakachena.
Mar 19, 2007 pa 10: 46 AM
Ini ndinofunga maAlex mhedzisiro anowedzera kunyatso kukura iyo saiti / traffic. Pane zvidiki vanhu vanogona kukurudzira mhedzisiro mhedzisiro nekuwana boka revanhu kuti vaise turu yekushandisa uye vashanyire vamwe nevamwe masayiti (ndaona akati wandei eaya masaiti achibuda munguva pfupi yapfuura)
Ini pachangu, ini ndinoyera saiti kubudirira nekukosha kwayo uye nemhinduro. Nzira yekuyera izvo kwandiri ndeyekutarisa dura rangu rewebhu zviga uye nekuona yakatsiga tsika yekuwedzera traffic.
Aug 9, 2008 pa 9: 42 AM
Kana iwe uchida kuti Alexa ikupe iyo yakanyatso kurekodhwa yetraffic yako iwe unogona kuisa widget iyo inozozivisa Alexa nguva dzese nguva iyo webhusaiti yako painoshanyirwa - kwete chete kana mumwe munhu aine bharaki rekushanyira.
Mar 30, 2009 pa 12: 15 PM
Makorokoto murume! Zvichida iwe unogona kupa mamwe matipi ekubatsira kutora yangu blog mune yepamusoro 100k futi!
Mar 30, 2009 pa 3: 12 PM
Basa rakaomarara, kublogi zuva nezuva, uye simba = kubudirira. Ndiri kumusoro 50k yepamusoro izvozvi.
Jun 30, 2009 pa 10: 22 PM
Zvino ndi 30 Chikumi, 2009 uye ndangogumburwa nepositi yako yaJan 3… Ngatipei kongiresi yekunonoka pane zvamabudirira. Pasi pezviuru zana mumwedzi mitanhatu chiitiko chaicho.
Isu takaburitsa yedu webhusaiti yetiresi munaNovember 2008 uye isu takazowana chinzvimbo chedu pasi pemiriyoni imwe. Tiri kuratidza kuti tichava pasi pezviuru zana nemazana emakore kupera.
Zvakanaka, enderera mberi nebasa rakanaka…
Jun 7, 2013 pa9: 05AM
Hi Doug, izvozvi Alexa yangu iri pakati pe105k-110k, chii chandingaite kuti ndipfuure hump uye pazasi pe100k. Saiti yakakura uye neruzivo zvirinani. Enderera mberi nebasa rakanaka, ndatenda!
Jun 7, 2013 pa 1: 19 PM
Kukadzi 3, 2015 na8: 29 PM
Iwe uchiri kukoshesa technorati chiyero mukuona kuti saiti irikuita sei?
Kwete, kutaura chokwadi handina kuramba kwenguva yakati rebei. Ini ndinotenda kuti hukama hwemagariro huri kuve nezvakawanda zvinoitika mazuva ano kubhodhi.